China Fast ngenqanawa ixabiso cheap 7 intshi, 8 intshi, 10.1 intshi ,12.1 intshi LCD umfanekiso wesakhelo ifoto yedijithali umzi-mveliso kunye nabavelisi | Layson
Fast ngenqanawa ixabiso cheap 7 intshi, 8 intshi, 10.1 intshi, 12.1 intshi LCD isakhelo photo yedijithali
Ubungakanani beskrini: 7 intshi, 8inch, 10.1 intshi, 12.1 intshi
I-1.I-Digital Photo Frame yi-electronics consumer consumer, ekwasetyenziswa nasekhaya. Umzekelo,Isipho soShishino, isipho seHolide, isikhumbuzo,uMboniso&umboniso, ibhaso leNtlalontle,iModem ifenitshala,ifoto yomtshato,ukufota idijithali,njl.
I-2.I-Digital Photo Frame isetyenziswe njengefreyimu yemifanekiso ebukekayo kunye nefreyimu yeefoto. Ukubeka kwikhawuntara, ukuxhoma eludongeni kwaye isetyenziswe njengomatshini wentengiso oguquguqukayo kunye nome nkqi ( Udederhu lweevenkile, iziko loLonwabo lweHotele, inqanawa yeKofu, iCorridor, njalo njalo.)
1) I-ABS yePlastiki ePheleleyo yeSakhelo+3mm yeglasi ye-Acrylic Umaleko woMkhuseli ngokuchasene nePhaneli yeLCD.
2) Inkxaso ngokuzenzekelayo kuMboniso weSilayidi kunye nokudlala kwakhona.
3) IiKhadi zeMemori ezihambelana neFlash: Slot Card SD, USB Port, MMC and MS Card Slot
4) Ubonelelo lwaMandla: DC 5V 1A
5) Indlela yokusebenza:Amaqhosha oMsebenzi oPhambili.
6) Ixhasa iKhalenda, iClock kunye neAlarm.
7) Ulwimi lwe-OSD lufumaneka ngesiTshayina / isiNgesi / isiJamani / iSpanish / isiFrentshi / isiPhuthukezi, njl.
8) Umbala weShell yangaphandle: zombini uMbala oMnyama kunye noMbala oMhlophe ziyafumaneka.
9) Umsebenzisi Unokulungelelanisa umahluko, i-angle yokujonga ububanzi, inkcazo kunye ne-Colorfull ye-LCD Panel.
I-10) Indlela yokufakela: Ukubuyisela ukubuyisela ukumisa okanye ukulungiswa kwe-VESA Hole Fixing.
I-11) Izixhobo zokuPakisha: I-Manual Manual + Adapter (i-USB Cable iyakhethwa).
12) Indawo eSebenzayo: Ivenkile enkulu, iSikhululo seenqwelomoya, iLift, iSitishi, iHotele, iziko lokuphumla, ivenkile, izakhiwo zorhwebo, isikhululo sikaloliwe esingaphantsi komhlaba, kunye nezinye iindawo zikawonke-wonke.
7-intshi yesakhelo photo yedijithali
7” Iphaneli yeTFT
800 x 480(H * V) P
ikhadi SD, USB Disk
Eyakhelwe ngaphakathi Inkumbulo yeFlash:
Ngokuzithandela, qinisekisa ngaphambi kokuveliswa
Isantya esiphezulu se-USB 2.0 (I-Host & OTG)
AC100 ~ 240V 50 / 60 HZ
Ewe/Ngokuzikhethela nge-Desktop Bracket
Ewe/Ngokuzithandela w/ Isibiyeli sobuqu
Isibiyeli sokuFaka eludongeni:
Ewe/Ngokuzikhethela w/ Isibiyeli sokuNqanyiswa eludongeni
Emhlophe, emnyama, eyenzelwe wena
Iplastiki (ABS + PC)
7 intshi ifoto yedijithali isakhelo
iadaptha inikwe amandla
Ubungakanani beBhokisi yoMbala:
Ngaphambili: 10.1″ 12.1″ 15.6″ 17″ 18.5″ 19″ 21.5″ 23.5″ 27″ 32″ 43″ Vula udonga lweSakhelo seMoni eFakelwe udonga lweLCD
Okulandelayo: China 55 Intshi yangaphandle Touch Screen Kiosk kunye Waterproof kunye Sunlight efundekayo LCD Bonisa
Umboniso weDijithali weMiqondiso yeLcd
© Copyright - 2010-2021 : Onke Amalungelo Agciniwe. iveliso ezifakiwe, Imephu yesiza, Imiqondiso yeDijithali yeSikolo, Intengiso yeTouch Screen Kiosk, Imiqondiso yeDigital Directory, Dooh Umqondiso weDijithali, Itheyibhile yeDiy Touch Screen, Udonga lweVidiyo yoMqondiso weDijithali, Zonke iimveliso